ဂျွန်ဆင် 5.5 HP က Seahorse Tune-Up ကိုစီမံကိန်း | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
ဂျွန်ဆင် 5.5 HP က Seahorse Tune-Up ကိုစီမံကိန်း
လော့ဂ်အင် or စာရင်း မှတ်ချက်များ post မှ
သင်ဤဂျွန်ဆင် 5.5 HP က Seahorse, ဒါမှမဟုတ်အလားတူ Tune-UP စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. မှတ်ချက်သို့မဟုတ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှိပါကအောက်ပါသူတို့ကိုစွန့်ခွာပါ။ ရမယ် Login သငျသညျမှတ်ချက်များစွန့်ခွာရန်ဆန္ဒရှိလျှင်။
သငျသညျယခုသင့် Facebook အကောင့်နှင့်အတူ login နိုင်ပါတယ်။
ကတင်ပြ Sean952 09: 11 - မွန်, 2017 / 08 / 15 အပေါ်
ကျွန်မဂရုတစိုက်ကျော်အရာအားလုံးကြည့်နှင့်ငါ၏တပြင်လုံးကိုမော်တာအထက်ယူနစ်အတွက်အရာအားလုံးအခမဲ့နှင့်ပုံမှန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးပေမယ့်ဆွဲစတင်အလွန်ခဲယဉ်းသည်နှင့်ကိုယ်တိုင်ကကျားကန်လည်ဖို့ကြိုးစားနေအလွန်ခဲယဉ်းသည်လာသောအခါဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကအဘယ်ကြောင့်ထွက်တွက်ဆလို့မရပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမကြိတ်သို့မဟုတ်ဆူညံသံခေါက်ရှိပါတယ်, ဘာမျှမကပဲအခမဲ့ချည်ငင်မဟုတ်ပါဘူးရာအရပျထဲကပုံရသည် ... မဆိုအကူအညီတောင်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ကတင်ပြ ttravis 09: 14 - Thu, 2017 / 11 / 58 အပေါ်
သငျသညျသစ်ကိုဖျံ၌ထားသလား? အသစ်ကဖျံသောအရာတို့ကိုခဏတင်းကျပ်စွာပုံပေါ်စေနိုင်သည် Somethimes ။ အသစ်တစ်ခုကိုလှုံ့ဆျောနှင့်အတူတူညီ။ ချိုးဖို့ကနာရီအနည်းငယ် Give နှင့်အမှုအရာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လျှင်ကြည့်ပါ။
ကတင်ပြ Sean952 09: 14 - Thu, 2017 / 21 / 00 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ သငျသညျသစ်ကိုဖျံ၌ထားသလား? ... by ttravis
ငါ redone ဖျံရှိသည်မဟုတ်သို့မဟုတ် ...
ကတင်ပြ ttravis 09: 15 - Fri, 2017 / 12 / 00 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ငါ redone ဖျံရှိသည်မဟုတ်သို့မဟုတ် ... by Sean952
သငျသညျလကျကိုအားဖြင့် flywheel ကိုဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်သူကအဟောင်းခေတ်လမ်းမစတင်ကြိုးကြိုးစားရန်ပတ်လည်တစ်ဦးကြိုးခြုံဖို့ကြိုးစားလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
သငျသညျအောက်ပိုင်းယူနစ်ကိုချွတ်ယူနှင့်က start ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားမလဲ
ကတင်ပြ stubnt 03: 22 - Thu, 2018 / 21 / 17 အပေါ်
အမှတ်ကွာဟမှု setting သည့်အခါအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာထားရန်ရှိရာ?
ငါ 1956 ဂျွန်ဆင်, CD-13A 5.5hp အမွှာအပေါ်ကွိုင်နှင့်ရမှတ် / condenser အစားထိုးတာပါ။
ငါ voltmeter နည်းလမ်းအားဖြင့်အချက် gamp နှင့်အချိန်ကိုက်သတ်မှတ်ထားရန်ကြိုးစားနေတာပါ။
သင်အချိန်ကိုက်စစ်ဆေးနှင့်အမှတ်ကွာဟမှုကိုသတ်မှတ်နိုင်ရန်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုဘယ်မှာထားသလဲ? ငါအချို့ရပ်နားခြင်းပြောပါဖူး, နှင့်အခြားသူများ WOT ပြောကြပါတယ်။ တချို့ကမခြားနားချက်ကိုပြောပါ, ဒါပေမယ့်ကြောင်းငါ့ထံသို့အသိလုပ်မထားဘူး။
ကတင်ပြ raysmythe 04: 03 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 13 / 26 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အမှတ်ကွာဟမှု setting သည့်အခါအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာထားရန်ရှိရာ? by stubnt
ကိုယ့်တစ်ဦး3မြင်းကောင်ရေ lightwin လုပ်ခဲ့တယ် ...
ကိုယ့်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ် lightwin တစ်3မြင်းကောင်ရေ ပြု. ငါကြည့်နှင့် cam ဆက်စပ်. အတွက်ပန်းကန်ရွေ့လျားသော်လည်း, ထိုအချက်များကိုအဆိုပါ cam နှင့်အတူနေထိုင်ကြောင်းကိုသိမြင်တိုင်အောင်အရေးမပါဘူးဒါကြောင့် sorta, ငါ့ကိုပစ်ချ၏။ အချိန်ကိုက် setting နေချိန်မှာသင့်ရဲ့အမှတ်အသား overshoot လျှင်သင်က "အစကတည်းက" အနေအထားတွင်စတင်ခဲ့ပြီးလျှင်တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သငျသညျဖြစ်စေဦးတည်ချက်အတွက် cam ကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့ရမှတ်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ ... ငါပြုသောအခါ, ငါထိပ်တန်းလိုအခမဲ့ပြေးများအတွက်တယ်မော်တာအနေအထားကိုလစ်လျူရှုခြင်းနှင့်မှ tuneup အစိတ်အပိုင်းများခန့် $ 30 ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒီတော့အောက်ခြေလိုင်း, တကယ့်အရေးမပါဘူး, ဒါပေမယ့်လက်မှာတာဝန်အပေါ်အခြေခံပြီး, အခြားသူများထက်အချို့သောရာထူးအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေဖြစ်နိုင်သည်။ မင်္ဂလာလူတွေအတွက်မော်တော်ကား!
ကတင်ပြ tonyr123 04: 01 - မွန်, 2019 / 09 / 59 အပေါ်
1958 5.5 ဂျွန်ဆင်
ငါအရပျ၌ပြန်ထားသမျှကို, အနိမ့်ယူနစ်, အ carburetor အသစ် gaskets နှင့်အသစ်သော plug ကိုရတယ်။ ဒါဟာတစ်မိနစ်ကို run ရုံတစ်ခုကွယ်လွန်သွားနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုစတင်ရန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်အနိစ္စရောက်လေ၏။
ကတင်ပြ Fischer 04: 16 - အင်္ဂါနေ့, 2019 / 20 / 56 အပေါ်
1960 ဂျွန်ဆင် SeaHorse CD-17 ပါဝါယူနစ်အကူအညီ
တစ်ဦးကိုငါ့ 1960 ဂျွန်ဆင် Seahorse 5.5 restore ပြန်ပျော်စရာရှိခြင်းခဲ့
ငါလမ်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုထံသို့လာကြပါပြီ။ အမှုခွဲနှင့်ဆလင်ဒါ hone နှင့် piston နှင့်ကွင်းအစားထိုးမည်သူမဆိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ကျွန်မကိုလည်း piston နှင့်ကွင်းဒဏျကွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကြိုးစားရန်ဆန္ဒရှိ။
ကတင်ပြ ttravis 06: 12 - Wed, 2019 / 14 / 49 အပေါ်
ဂျွန်ဆင် 5.5 HP က4တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဗီဒီယို restore
တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့တစ်တွေဂျွန်ဆင်4ပြန်လည်အပေါ်တစ်ဦး 5.5 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း youtube ကဗီဒီယိုကိုရှာနေခဲ့မှတ်ချက်ထားခဲ့တယ်။ ငါသည်ဤဆိုဒ် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်ပျက်) ကိုတက်လွဲချော်သွားတာနဲ့ရက်ပေါင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲသည်အသက်တစ် backup လုပ်ထားရာမှ restore ခဲ့သောကွောငျ့မူရင်း comment ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခဲ့သည်။
ငါသည်ဤထင် youtube ကရှာဖွေရေး သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ဗီဒီယိုလိမ့်မယ်။
ငါနောက်ပိုင်းတွင်ထိုအပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဒီ site ကိုမှထည့်သွင်းဖို့အချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်, ငါမူရင်း comment ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ကတင်ပြ Paramount1953 09: 24 - အင်္ဂါနေ့, 2019 / 19 / 41 အပေါ်
ထွက်ရှိမည်သူမဆို 1958 ဂျွန်ဆင် 5.5 မြင်းကောင်ရေ CDL-15 မော်တာရောင်စုံအဆိုပါကြက်သွေးများအတွက်အမှန်တကယ်ဆေးသုတ်အရောင်ကုဒ်သိကြပါသလား? ဒီတော့လျှင်, ဘာလဲ? ငါသည်ဤ Beauty မော်တာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအလယ်၌ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သည့်မော်တာသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားပြီးနောက်ဖြစ်၏ "ဟုအဆိုပါ heck? အဖြစ်ကောင်းစွာအခုဆေးထိုးခြင်းစခွေငျးငှါအဘယျသို့။ " ဤကိစ်စတှငျမဆိုအကူအညီအများဆုံးအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကတင်ပြ fabelknap 09: 25 - Wed, 2019 / 07 / 59 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ 1958 5.5 မြင်းကောင်ရေ CDL-15 မော်တာများအတွက်ဆေးသုတ်အရောင်ကုဒ်? by Paramount1953
သေချာဆေးသုတ်ကုဒ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့် link ကိုကိုအောက်တွင်ချွတ်ဆေးထိုးခြင်းဝယ်နှင့်တစ်ဦး 1955 redid ဘဲ, ဒါကြောင့်အကြီးအထွက်လှည့်။ ကောင်လေးအဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားအရောင်များရှိပါတယ်။
ကတင်ပြ fabelknap 09: 25 - Wed, 2019 / 07 / 53 အပေါ်
ကျွန်မစတိုင်အကြံပေးအဖွဲ့အိပ်ထဲသို့ထည့်နေကြသည်ဖို့ဖိအားအကြံပေးအဖွဲ့ကနေ 1955 5.5 HP ကဂျွန်ဆင် Seahorse ပေါ်တွင်လောင်စာဆီစုပ်စက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြု၏။ ငါတှေ့တစျခုကိစ္စကိုစားသုံးမှု၏ပိတ်လေဟာနယ်လိုင်းပြေး၏အကြောင်းကို 1 /2နာရီအကြာတွင်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူဖြည့်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောင်စာစုပ်စက်လိုင်းအတွက်လောင်စာများပက်ကျိကနေလေဟာနယ်သွေးခုန်နှုန်းမရှိခြင်းကနေချပေးကိုရပ်တန့်စေပါလိမ့်မယ်။ အခြားမည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်ကဒီပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်, သို့မဟုတ်ဤများအတွက်ပြင်ဆင်ချက်များခဲ့ဖူးပါသလား
အောက်ပါ link ကိုညွှန်ကြားချက်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းကိုပြု၏။ ကြေးဇူးတငျစကား
ကတင်ပြ Paramount1953 09: 30 - မွန်, 2019 / 20 / 10 အပေါ်
ဒီ 1958 များအတွက်ဆေးသုတ်အရောင် ပတ်သက်. အချက်အလက်ဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည် "Seahorse ။ " ကိုယ့်ခဏအကြာဆေးသုတ်၏ပထမအင်္ကျီကိုပက်ဖျန်းခြင်းနှင့်ငါသညျဤရိုက်ထည့်ကြောင့်ခြောက်သွေ့နေသည်။ ဒီ website ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးပိုပြီး "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်" စီမံကိန်းသို့ "အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း tag ကို" မှငါ့ပြန်ဆောက်စီမံကိန်းကိုလှည့်ပါတယ်။ ကောင်းသော '' Lookin! ငါပြီးစီးအပေါ်သို့မကြာမီဓာတ်ပုံ post ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5 ရက်ပတ်လုံး 20 နာရီအကြာက
6 ရက်ပတ်လုံး 20 နာရီအကြာက
763986 BRP Evinrude သူပုန် TBX သံမဏိ 3-Blade ကမ်းလွန် Cruise (15-1 /2x 17) RH
763985 BRP Evinrude သူပုန် TBX သံမဏိ 4-Blade Prop (15-3 /4x 15) LH
763984 BRP Evinrude သူပုန် TBX သံမဏိ 4-Blade Prop (15-3 /4x 15) RH
၇၆၃၉၈၇ BRP Evinrude သူပုန် TBX သံမဏိ (၃) ဓါးပြပါကုန်းတွင်းသင်္ဘော (763987-3 / 15 x 1) LH
V-011010 Gearcase 14 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 မီချီဂန်လူမီနီယမ်ကျားကန် (4-23 /615 x)
V-391203 Gearcase 14 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 Evinrude ဂျွန်ဆင်လူမီနီယမ်ကျားကန် (4-23 /615 x)
V-011009 Gearcase 14 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 လေယာဥ်ပန်ကာမီချီဂန်လူမီနီယမ်ကျားကန် (4-21 /615 x)
V-391202 Gearcase 14 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 Evinrude ဂျွန်ဆင်လူမီနီယမ်ကျားကန် (4-21 /615 x)
V-011008 Gearcase 14 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 မီချီဂန်လူမီနီယမ်ကျားကန် (2-19 /615 x)
V-391201 Gearcase 14 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 Evinrude ဂျွန်ဆင်လူမီနီယမ်ကျားကန် (2-19 /615 x)
V-011007 Gearcase 15 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 17 မီချီဂန်လူမီနီယမ်ကျားကန် (6 15 x)
V-391200 Gearcase 15 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 17 Evinrude ဂျွန်ဆင်လူမီနီယမ်ကျားကန် (6 15 x)
V-391535 Gearcase 15 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 Evinrude ဂျွန်ဆင်လူမီနီယမ်ကျားကန် (2-15 /615 x)
V-011006 Gearcase 15 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 မီချီဂန်လူမီနီယမ်ကျားကန် (2-13 /615 x)
V-391536 Gearcase 15 Spline နှင့် Thru-Hub exhaust များအတွက် 1 Evinrude ဂျွန်ဆင်ကျားကန် (2-13 /615 x)